Ndingayenza njani iikhonkco kwiwebhusayithi yam njenge-generator backlink generator?
Namhlanje, wonke umntu uyazi ukubaluleka kwiprofayili yekhonkco yekhwalithi nganye kwinkqubela yezinga lewebhu. Kwaye akukho mfuneko yokutsho ukuba umgangatho uhlala uhlabalala apha - ukulibala loo maxesha adlulileyo xa inani eliphezulu le-backlink lisetyenziselwa ukubeka izinto eziphambili, kunokuba lube nomgangatho. Kwaye ngaphantsi ndiza kukuxelela ngeendlela eziphambili zendlela zokufumana iikhonkco eziphezulu, okanye ndiyakwazi ukuthetha - nje nge generator backlink generator kwaye ngaphandle kokunciphisa. Ngoko-ke, makhe sibone indlela onokufumana ngayo i-backlinks esemgangathweni, okanye singathi i-backlink generator ye-DIY, kunye nokutshintshana kwe-link link, kunye nokwenza izibhengezo zebhanki zendwendwe ukuze ufumane unxibelelwano lwe-organic kunye ne-PR ephakamileyo (isikhundla sekhasi) kunye ne-DA (igunya lesizinda ) ukubuyisa.
Le ndlela endala yokudibanisa iinqununu (ngaphandle koko, ukuxhunywa kwamavili) isetyenziselwa kakhulu ukwakha inani elikhulu lokubuyela emuva. Utshintshiselwano lwekhonkco luyaziwa ngokuba yi-generic backlink generator. Le ndlela ivame ukuvumela ukufumana amaninzi amanxibelelwano, umzekelo phakathi kwesayithi lakho kunye nezinye iwebhusayithi (i. e. , amaphepha eblogi alawulwa ngabalingani bakho, okanye mhlawumbi nayiphi na iwebhusayithi ekulungeleyo kwaye ilungele ukuthatha inxaxheba kulolu cwangciso oluxhamlayo).
Ngokuqinisekileyo, ukuya kutshintshiselwano lwekhonkco kunemivuzo eninzi, ngaphandle kwengozi yengozi yokufumana isohlwayo sokuhlengahlengiswa ngeenjini zokukhangela - kumacala omabini alo mcimbi. Ndiyathetha ukuba phantsi kwayo nayiphi na imeko kufuneka ube nesibindi ngokwaneleyo ukuba uzame kanye kanye - ngenxa yokuba le ndlela yileyo ndlela abantu bafumana inzuzo. Ngoko, ukubeka ingqwalaselo ephambili kwiingeniso zakho ezithembisayo, kungekhona ukulahlekelwa kwezinto ezikhoyo ezinxulumene nokutshintshiselana kweekhonkco, ukwacetyiswa ukuba uthathe isilumkiso. Ndiyathetha ukuba ukuba neblogi enye okanye iwebhusayithi ukuvavanya eli cwangciso ngethuba lokuqala liza kuba sisigqibo esilungileyo kakuhle sokuqonda imigaqo esetyenziswayo yomdlalo kwangaphambili, ngaphandle kokufumana isohlwayo esicwangcisiweyo.
Iindwendwe zeBhulogi zeeNdwendwe
Utshintshiselwano lwekhonkco lubonakala luyinto enobungozi nokuba uzame kanye kanye, akunjalo? Emva koko usenokuqwalasela enye indlela yokwakha ikhonkco yekhwalithi-ukubhala kwezithuba zebhanki zeendwendwe. Xa ukwenzile ngokufanelekileyo, ukubhengezwa kweendwendwe kunokuba yinto efanelekileyo enokukuvumela ukuba wenze njenge-generic backlink generator ngokwakho. Zivakala amandla okwenene kwizithuba zabamenywa - musa ukuzibamba ixesha lakho ngokubhala umxholo ophezulu ochaphazelekayo. Ngokukhawuleza xa unesivumelwano sokuqala sokupapashwa kwiblogi eyaziwayo okanye nayiphi na indawo yomthombo wesithathu kwi-Intanethi enekhasi elaneleyo kunye negunya lesigunyaziso, ixesha lokuba utyhale ixesha lakho nomzamo ngokubhala.
Xa iqela lakho okanye isithuba seendwendwe silungile, konke okufunekayo kukungenise kwi-backlink yemvelo ngokubuyisela. Ngendlela, egunyazisiweyo ngeenjini ezinkulu zophando (njenge-Google ngokwalo), le ndlela mhlawumbi ikhuselekile. Ngoko, kufuneka uzame ukufumana i-backlink esemgangathweni kunye nezithuba zabameli. Emva koko, ukuba kusetyenziswa ngokubanzi ukupompa izithuthi ezijoliswe ngqo kwiziko lewebhu, le ndlela iyabonakala ngokubini ngokutsha, kunye neengcali Source .